သည်နေ့(၂၉.၄.၂၀၀၉)သည် ကျွန်မ၏ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဘဝတစ်ပါးကို---ပြောင်းရွှေ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တာ (၆)နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်..။ကျွန်မရဲ့ အစ်ကို အစ်မများကတော့ ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးရှိစဉ်က ဥပုသ်စောင့်၊ တရားအားထုတ်ခဲ့တဲ့ ဘောင်ဒရီလမ်းက မိုးညှင်းဝိပဿနာတိုက်သစ် တွင်အာရုံ ဆွမ်းကပ်နေလိမ့် မယ် ဆိုတာကို သွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသော ကျွန်မစိတ်ထဲမှာရည် မှန်း ပူဇော်နေရပါတယ်….။
(ဆုယူစည်းဝေးဖြူဖြူဖွေးလိမ့်…စက်မှေးခိုက်တွင်-----အိမ်မက်မြင်သို့...မရွှင်ယူတလွမ်းလိုက်လှရှင့်..)---လို့လျှပ် တပြက်တော့…. ခံစားလိုက်မိပါသေးတယ်..။ကျွန်မပြုသမျှ အမြဲအမျှဝေခဲ့သော်လည်းသည်နေ့တော့ မွေးမိခင်ကြီး ရဲ့လူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေ့များဟာ ကျွန်မအတွက် တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်ခဲ့သော မှတ်တမ်းဝင်ရက်စွဲ များဖြစ်ခဲ့ ရတာ ကို အထူးသတိရနေမိပါတယ်..။
သားသမီးနဲ့မိဘတွေဟာ သားသမီးများအပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်ထားတယ်..အဲဒီမျှော်လင့်ချက်ကြီးများစွာ နဲ့ လောက မှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာ နားလည် ထားကြရလိမ့်မယ်ဆိုတာကို သီတဂူဆရာတော် ဘုရားကြီး ဟော ကြားတော်မူသော..မိဘများရဲ့မျှော်လင့်ချက်..တရားတော်ကိုလည်းကျွန်မ ပြန်လည်နာယူ လိုက်မိပါ တယ်..။ ပထမလေးချက်က ပစ္စုပ္ပန်ဘဝအတွက်တုံ့ပြန်မဲ့ကျေးဇူးကို မျှော်လင့်တာ၊ ကျန်တစ်ချက်က တော့ ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားပြီးတဲ့ အချိန်(တမလွန်)အတွက်မျှော်လင့်တာသာ ဖြစ်ပါတယ်..။
မေတ္တာဆိုတာကိုယ့်အတွက်လုံးလုံးမျှော်လင့်ချက်မထားဘူး.......အဲဒီကြီးမားတဲ့မေတ္တာနဲ့ပဲ ကျွေးမွေးပြုစု စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြ တယ်..။ ပေမဆိုတာကတော့ချစ်ခြင်းပေါ့လေ..မေတ္တာနဲ့တော့မတူဘူး။ မျှော်တယ် ဆိုတာကတော့…သူတို့အ တွက် တုံ့ပြန်လာမဲ့ အကျိုးကိုမျှော်လင့် တောင့်တတတ်ကြပါတယ်တဲ့..မိဘက ပြုစုစောင့်ရှောက် တာ မေတ္တာ နဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ ပြန်မျှော်လင့်တာကတော့ ပေမဖြစ်နေတယ်လို့..မိဘရဲ့မေတ္တာနဲ့အတူ ပေမ ရောနေ တယ်လို့မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့ပါတယ်..။
ရဟန်းတို့ဤအကြောင်းကို ကောင်းစွာရှုမြင်သောမိဘတို့သည် အမျိုး၌ဖြစ်သော သားသမီးတို့ကို အလိုရှိကုန်၏ ဟု(မိန့်တော်မူ၏။)
အကြောင်းငါးမျိုးတို့ကိုကောင်းစွာမြင်သည့် ပညာရှိမိဘတို့သည် သားသမီးကို အလိုရှိကြ ကုန်၏၊ငါတို့မွေးမြူသောသားသမီးသည်ငါတို့အား ကောင်းစွာလုပ်ကျွေးမွေးမြူပေလိမ့်မည်..။ ငါတို့၏အမှုကိစ္စကိုလည်းပြုလုပ်ပေလိမ့်မည်..။အမျိုးအဆက်သည် ကြာမြင့်စွာ တည်ပေလိမ့်မည်၊ အမွေခံဖြစ်ပေ လိမ့်မည်။
ထို့ပြင်ကွယ်လွန်သောအခါငါတို့အား အလှူ၏အဖို့ကိုပေးဝေကြလိမ့်မည်။ဤအကြောင်းတို့ကို ကောင်းစွာရှုမြင်သည့် ပညာရှိမိဘတို့သည် သားသမီးကိုလိုချင်တောင့်တကုန်ကြ၏။
ထို့ကြောင့် ပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုသိ၍ သူ့ကျေးဇူးကို ထင်စွာပြုတတ်သော၊ ငြိမ်သက်သောစိတ်ရှိ သောသူတော်ကောင်းတို့သည် ရှေးကပြုဘူးသည်ကို အဖန်ဖန်အောက်မေ့လျက်မိဘတို့ကို လုပ်ကျွေး မွေးမြူကြကုန်၏။
ကျေးဇူးပြုဘူးသူ၏ ကိစ္စကို ပြုလုပ်သကဲ့သို့ ထို့အတူ မိဘတို့၏အမှု ကိစ္စကိုပြုလုပ်ကြကုန်၏။မိဘတို့ အဆုံး အမကိုလိုက်နာလေ့ရှိ၍ မွေးမြူဘူးသောမိဘတို့အား လုပ်ကျွေးမွေးမြူလေ့ရှိသော အမျိုးအနွယ်ကို မယုတ်စေ၍ သဒ္ဓါတရား ရှိသည့်သီလနှင့် ပြည့်စုံသောသား သမီးသည် ချီးမွမ်းထိုက်သူဖြစ်ပေသတည်း။
သုတ္တန်ပိဋက၊နိကာယ်ငါးရပ်၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် ၊အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော် ပဉ္စကနိပါတ်၊ပုတ္တသုတ်(မြန်မာပြန်)
မိခင်၊ဖခင်ကျေးဇူးရှင် တို့ရဲ့ ကြီးမားတဲ့မေတ္တာဟာ ပေမ....ရောနေတဲ့မေတ္တာဆိုခဲ့ရင်လည်း သူတို့ရဲ့ လိုချင်မျှော် လင့် ခဲ့ရတဲ့ ပေမ ဆိုတာ အမည်ခံသက်သက်မျှသာ လို့---ကျွန်မထင်ပါတယ်....။
တကယ်တော့လည်း မျှော်လင့်တယ် .ယုံကြည်တယ် တကယ် တော့ လည်းမဝံ့မရဲနဲ့ မျှော်လင့်ရတဲ့ မျှော်လင့်ရုံ မျှော်လင့်ရတဲ့ မျှော်လင့်မှု သက်သက်ကလေး အဖြစ်သာဖြစ်ခဲ့ရှာတာပါ..။
မျှော်လင့်ချက်အဆင့်တွေကို ကျော်လွန်ပြီး...တောင်းဆိုတာ ၊အတင်းအကြပ်ပြုတာ......အကြပ်ကိုင်တာ…ထိန်း ချုပ်ကြိုးကိုင်တာ များမရှိခဲ့ရှာသော မိဘများစွာတို့ရဲ့မေတ္တာတရားများစွာဟာအားအင်ကြီးမားကြတာ ကို သားသမီးတိုင်း သဘောပေါက်ကြရင် ကောင်းမှာ ပါပဲ..။ စာနာနားလည်ပေးနိုင်ကြရင်လည်းကောင်းမှာပါပဲ..။
မိခင်ဘဝကိုသူများထက် ခပ်စောစောလေးရောက်ခဲ့ရသော ကျွန်မကတော့ သည်လို မမျှော်လင့်တတ်အောင် မမျှော်လင့်ဖြစ်အောင် ငါကြိုးစားမယ်လို့ မာန်တင်းခဲ့ဘူးပါသည်..။
သားသမီး(၇)ယောက်ကိုပင်ပန်းကြီးစွာကျွေးမွေးပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ရတာ…ပျိုးထောင်ပြုစုပြီး..အချိန်တန် ပန်းလေး တွေပွင့် အသီးလေးတွေသီးဆိုတော့ အချိန်ကျတော့-------ဆရာတော်အရှင်အာဒိစ္စရံသီ ပြောသလိုပဲ.....ပိုင်ရှင် ကပေါ်လာတော့တာကိုး။
အဲဒီပိုင်ရှင်တွေရဲ့လက်ထဲ ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သော်လည်းကောင်း၊ မပျော်မရွှင်သော်လည်းကောင်း ထိုးအပ် လိုက်ရတော့တာပါပဲ..။
ပြီးတော့သူစိုက်ပျိုးပြုစုလိုက်တဲ့ပန်းကလေးပွင့်နေတာ၊သီးနေတာ၊လှနေတာကို ခြံပြင်ကနေငေးမောနေရတဲ့ဘဝ မျိုးဆိုတာကို ကျွန်မမိဘများကို ကြည့်၍ခံစားသိဖြင့်နားလည်ခဲ့ဘူးပါတယ်….။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်က ထိုသို့သော ပန်းကလေးဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ ခံစားသိဖြင့်နားလည်ခဲ့တဲ့ အချိန်ဟာ တော်တော် နှောင်းနေ ခဲ့ပါတယ်..သိပ်ပြီးနောက်မကျခဲ့တာကိုပဲ ကိုယ့်ကိုကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်..။
တကယ်တော့ နောက်မကျတဲ့အချိန်မှာ ဖြည့်ဆည်းဖြစ်ခဲ့သော်လည်းရာနှုန်းပြည့် ဖြူစင်လှတာတော့ မဟုတ်ပါ…။ ကျွန်မမှာလည်းမေတ္တာနဲ့ အတူပေမ-ကတော့ရောနေပါသေးတယ်..။
ကျွန်မ၏ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး ချိန်နဲ့အတူ..ထိုစဉ်ကကျွန်မလေ့လာ နေခဲ့သော ဘာသာရပ် အတွက် မိခင်ကြီးရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၅နှစ်တာပြုစုလုပ်ကျွေးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်…။
လူ့ဘဝကို ၈၃နှစ်တာနေထိုင်သွားခဲ့သော မိခင်ကြီးသည် ကျောင်းဆရာမပီပီ ဂုဏ်သိက္ခာ ကြီးမား လှပါတယ်. ......မလိုအပ် သောစကား၊အပြောင်အပျက်စကား၊ ရယ်ရွှန်းပတ်ရွှန်းစကား ကိုပင်ပြောဆို လေ့မရှိ။
အိမ်တိုင်ယာရောက်ကန်တော့သော တပည့်များရှိလျှင် ဝမ်းသာကြည်နူးနေတတ်သည်။သိတတ်သော သားသမီးလာလျှင် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေသလောက် မသိတတ်သော သူတစ်ချို့အပေါ် ဘယ်တော့မှ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားမှာ မဟုတ်သော ရင်ထဲက စကား များကို အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်သောကျွန်မ ကစောစီးစွာနားမလည်ခဲ့ပါ..။
နောက်ကျမှနား လည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…။ နားလည်မှုနဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးနေခဲ့ရတဲ့ကာလဟာ အလွန်တိုတောင်း လှပါတယ်..။ပြန်လည် ၍လည်းဘယ်သောခါမှမရရှိနိုင်တော့ပါ..။
မိခင်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်လို့ဆိုရမဲ့ ၂၀၀၃ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာ ကျွန်မ ဘဝအချိုးအကွေ့တစ်ခုအ တွက်အလုပ်ကထွက်ထား ချိန်ဖြစ်လို့ အချိန်ပြည့်နီးပါးအတူနေခဲ့ရပါတယ်..။ဒါထက် ပိုကံကောင်းတာကတော့ ကျွန်မအားကူဖော်လောင်ဘက် တူမဝမ်းကွဲလေးက ဧပြီလ(၇)ရက်နေ့မှာရွာပြန်ပါရစေခွင့်တောင်းလာတော့ ကျွန်မရဲ့ပြုစုလုပ်ကျွေးခွင့်ဟာ နေ့ရောညပါဖြစ်ခဲ့ရတာကို ပြန်တွေးတိုင်းပီတိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
မိခင်ကြီးဟာဆီးချိုရောဂါကြောင့်မျက်စိကွယ်နေခဲ့ပါတယ်..မခွဲလိုတဲ့အတွက် သည် အတိုင်းထားခဲ့ရတာ..။မနက်ဆိုကျွန်မတာဝန်က အမေ့ရဲ့ သွားအံပုံနဲ့ထည့်ထားသောဘူးလေးကို သေချာတိုက်ချွတ် ဆေးကြောရပါ တယ်…ကုတင်ပေါ်မှာပင် မျက်နှာသစ်ဇလုံနှင့်သစ်စေ ပြီး…သနပ်ခါး ကျောက်ပြင်ကိုမ-လာကာ လူးပေးရပါ တယ်..။
ဘုရားရှစ်ခိုးစေပြီးမှ..ကျွန်မက အမေကြိုက်တတ်သော မနက်စာမုန့်ဟင်းခါး၊ဘယာကြော် အသုပ်စုံ၊တစ်ခုခု စီစဉ်ရပါတယ်..။ ပုစွန်ခြောက်မှုန့်ကဲကဲ၊မန်ကျည်းရေရွှဲရွှဲနဲ့ ခေါက်ဆွဲသုပ်ကို ကြက်သွန်ဖြူကိုက်စားပြီး ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက် ကိုသောက်သုံးတတ်သော မိခင်ကြီးအားကျွန်မ လွမ်းမိသည်နှင့်ယနေ့ ဆွမ်းတော်ကို ခေါက်ဆွဲ သုပ်ကပ်လှူမိပါသည်..။
ဆီးချိုရောဂါကြောင့်ဝမ်းချုပ်တတ်သောမိခင်ကြီးအတွက်ကျွန်မရဲ့ သူနာပြုဆရာမ သူငယ်ချင်းများထံမှ ဝမ်းချူနည်းကို သင်ရပါတယ်…..။ဝမ်းသွားပြီးတိုင်း ဆီးသွားပြီးတိုင်းတစ်သျှူးဖြင့် သေသေချာချာ သုတ်ပြီးပေါင်ဒါ မှုန့်ဖြူးပေးရသည်..။
ထိုအချိန်များတွင်.ကျွန်မငယ်ငယ်ကနေမကောင်းတော့ နလံထချိန်တွင်ရေချိုးပေးပြီးနံ့သာ ဖြူသွေးပြီး တစ်ကိုယ်လုံးလိမ်း ပေးခဲ့သောအမေ့ကိုအမြဲသတိရနေမိပါသည်..။
ထိုလနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ ကျွန်မအမေ့ကိုရေချိုးပေးခဲ့ခြင်းဟာနောက်ဆုံးပဲဆိုတာ---- ထိုအခါ ကကျွန်မ..မသိခဲ့ပါ..။ကျွန်မကသက်ကြီးပူဇော်ပွဲသွားတဲ့အဖေ့ကို အတုယူလို့ မတက်ရောက်နိုင်သော မိခင်ကြီးကို အိမ်မှာ လုပ်ပေးခဲ့တာပါ…။ ကုလားထိုင်တစ်လုံးနဲ့ ထိုင်စေပြီးခေါင်းလျှော် ရေချိုး၊ချေးတွန်း သန့်စင်ပေး ခဲ့ပါတယ်..။
ကျွန်မ ငယ်ငယ်ကလိမ်းပေးခဲ့ဘူးတဲ့နံ့သာ ဖြူကို တကိုယ်လုံးလိမ်းပေးခဲ့ကာ အဝတ်သစ်အစားသစ် လဲလှယ်ပေးခဲ့တာ------။ ရပ်ကွက်ထဲမှလူများလာကန်တော့ချိန်မှာသနပ်ခါးအဖွေးသားနဲ့လှပနေခဲ့ရပါတယ်…။ပြီးမှ...ဘုရားကျောင်းဆောင်မှာ ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းညှိပေးပြီး ဘုရားဝတ်တက် စေခဲ့ပါတယ်…။
ထိုစဉ်က ကျွန်မကံမြင့်တရားပွဲက အပြန်နာယူခဲ့သောတရားများ ကိုမျှဝေပြောပြခဲ့လျှင်ပြုံးလျက် ခေါင်း တစ်ငြိမ့်ငြိမ့် နားထောင် နေခဲ့တတ်ပါတယ်..။
တကယ်တော့ အမေဟာ မိုးညှင်းဆရာ တော်ဘု ရားကြီး ထံပါးမှာ နှစ်ရှည်လများတရား အားထုတ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ တရားအသိရင့် ကျက်ခဲ့ပြီးသားပါ…။
ရောဂါထူးထူးထွေထွေ မဖြစ်….စားနေကျအစာများကိုညင်းပယ်ရင်း ညင်းပယ်ရင်းနဲ့ ကံကုန် မိုးချုပ်၊ လက် တွဲဖြုတ် ခဲ့ တာသာ ဖြစ်ပါတယ်..။
မသေခင်တစ်ရက်အလိုမှာ..ကျွန်မ အမလတ်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆွမ်းကျွေးတရားနာ စေခဲ့သည်ကို ပင်သာဓုခေါ်ပြီး စိတ်ချလက်ချအိပ်ပျော်သွားခဲ့တာ..။
ကျွန်မနေ့လည်စာ ကျွေးမယ်လို့ခြင်ထောင်လှန်တော့ ငယ်ချေးနံ့များထောင်းထောင်း ထ၍နေခဲ့ပါတယ်…။ အတွေ့အကြုံ မရှိသော ကျွန်မက နောက်ဆုံးဝမ်းသွားခြင်းကို မသိ..ရှင်းလင်းသုတ်သင်ရင်း၊ပူနေသော ကိုယ်ကို ရေပတ်သုတ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်..။
ကျွန်မကခေါင်း၊ကျွန်မ၏သားကခြေထောက်၊ကျွန်မအစ်မများကကိုယ်ခန္ဓာကို သုတ်ပေးကြရင်း…ပြိုင်တူရွတ်ဆိုနေသော တရားသံများအောက်မှာ ပင်နောက်ဆုံးထွက်သက်ကို မှုတ်ထွက်လျက် ထာဝရ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်..။
ကျေးဇူးရှင်အမေ.....အမေ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက် အိမ်မက်တွေကို သမီးအပြည့်အဝဖြည့်ဆည်း ခဲ့နိုင်တယ် လို့ကိုယ်ကို ကို မယူဆ ပါဘူး။
ခွင့်လွှတ်ပါအမေ…သမီးလိုနှောင်းနောင်တတွေ မရကြလေ အောင်၊ကန့်သတ်ချိန် နည်းနည်းလေးကိုတန်ဘိုး ထားတတ်ကြလေအောင်..မိဘများရဲ့ရင်ထဲက မျှော်လင့်ချက်တွေကို နှလုံးသား ထပ်တူပြုပြီး နားလည်ကြ အောင်…သမီးသည်စာစုလေးကို ရေးသားမျှဝေပါရစေအမေ…။
သမီးပြုပြုသမျှ ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစု ကို အမေသာဓု ခေါ်နိုင်အောင် သမီးအမျှဝေ လျက်ရှိပါတယ်..။
အမေရဲ့ ခြေ အစုံ ကို ဦးတိုက်ရှစ်ခိုးကန်တော့လျက်ရှိနေပါတယ်..အမေရယ်..။
(ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီး၏ဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းသွားကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်း(၆)နှစ်ပြည့်အမှတ်တရစာစုအဖြစ်…. ဓမ္မရံသီ Website မိဘမေတ္တာဘွဲ့တရားတော်များမှ သီတဂူဆရာတော် ဒေါက်တာဉာဏိဿရ ၏(မိဘများကသားသမီးပေါ်မျှော်လင့်ချက်) တရားတော်ကို ကိုးကားရေးသားပါသည်..။)
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 5:57 PM
Awakening Presence(Nuns' Community in USA)
Planting Dhamma Seeds the Emergence of Buddhism in...
စိတ်ဆိုသည်မှာ မပြေးပါ…ဆုံရာ အာရုံသိခြင်းတည်း
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ရဟန္တာ Venerable Acariya Mun ၏အထုပ္ပတ္တိ
Our Deepest Sympathy to Italy Deadly Earthquake
နောက်ကျခြင်းအား ၊ လျှောက်ထားတောင်းပန်